ụgbọ oloko na-ebu | RayHaber | raillynews
Homeụgbọ okporo ibu
Nọmba ụgbọ oloko 44015, nke na-eme njem Eskişehir Konya, na-ekesa achịcha na nso obodo Sülümenli nke Afyon ma na-anwa ịgafe okporo ụzọ site na-emebi ihe mgbochi ebe a na-emechi ihe mgbochi na ọkwa gafere. [More ...]
Mgbe ndị na-eyi ọha egwu PKK kpochapụrụ ihe mgbawa ejiri mee ebe Elazig-Tatvan njem, ebulitere ụgbọ ala nke ụgbọ oloko ahụ ka afọ anọ gachara. Emere ya na July 4, 30 na Masala, Burgudere obodo Elazig. [More ...]
China'sgbọ okporo ígwè China na-aga Europe iji Marmaray; Changgbọ mbụ ụgbọ okporo ígwè Chang'an, nke na-agaghị akwụsị akwụsị site na iji ụgbọ Marmaray na-aga Eshia na Europe, na-aga n'akụkụ abụọ site na ọdụ Marmaray Ayrılıkçeşmesi gaa njem ya. [More ...]
Ihe ọghọm ụgbọ oloko İzmir! .. Site na Alsancak Port, ụgbọ oloko ụgbọ ala nke 7, dọpụrụ n'ụzọ Şehitler Street n'ihi ebumnuche na-enweghị isi. Onweghi mmerụ ahụ na akpaghasị akụkọ ihe mere eme kọrọ. Mgbasa Izmir [More ...]
si China, mbụ ibu ụgbọ oloko laara Europe iji Marmaray China Railway Express, a na ndokwa na-abata na November 5 Turkey. China Railway Express, ga-amalite njem ya site na China gaa n'okporo ụzọ njem mba ụwa nke Caspian “Trans-Caspian [More ...]
Ihe ọghọm ụgbọ oloko na Kütahya! .. 1 Oke 2 Onye E merụrụ ahụ
Ndị mmadụ abụọ merụrụ ahụ n'ụgbọ 1 na Kütahya ebe ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu kụrụ ọkwa na-agafe. Citizensmụ amaala kọọrọ ihe mberede ahụ merenụ, ndị otu ahụike butere ndị merụrụ ahụ n'ụlọ ọgwụ. Amụtara na ọnọdụ otu onye dị njọ. [More ...]
Ududo ụgbọ ala na ọkwa ọkwa na Tarsus, 4 merụrụ ahụ
Mpaghara Tarsus nke Mersin n'ihe ọghọm ụgbọ oloko mere na abalị, ụgbọ okporo ígwè na - ebu ibu kụrụ ọkwa nke gafere ndị 4 merụrụ ahụ n'ụgbọ ahụ. Dika ozi enwetara, ihe ọghọm ahụ mere n’abụ 22.15 n’abali, District Yenice na okporo ụzọ Yunacik [More ...]
Wgbọala ụgbọ oloko na mpaghara Tarsus nke Mersin rụrụ arụ maka ihe akọwaghị. Dika ozi enwetara, ufodu ugbo ala nke ugbo ala nke si Mersin rue Adana uzo, Tarsus Station rutara ihe kpatara ebughi uzo do. [More ...]
Ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ oloko na-ebugharị n'etiti China na Europe ruru 5 puku 266 na ọnwa asatọ mbụ nke afọ. Mmụba nke 25 dị elu karịa afọ gara aga, ọrụ ụgbọ oloko, ihe dị mkpa [More ...]
Ndị 5 merụrụ ahụ n'ihi ụgbọ oloko ahụ kụrụ ụgbọ ala na ọkwa nke na-agafe na mpaghara Türkoğlu nke Kahramanmaraş. Dika ozi enwetara, Adana-Elazığ ụgbọ oloko ụgbọ njem nọmba 63609, mpaghara nke mpaghara Beyoğlu Kahramanmaraş-Adana [More ...]
Na Czech Republic, ụgbọ okporo ígwè lime ahụ mebiri emebi ma gbatuo ya. E biputere foto nke oge ụgbọ oloko ahụ. Ihe mberede dị nso na Marianske Lazne na Karlovy Vary mpaghara 29 Na July, oge mpaghara 16.30 [More ...]
Na Russia, ogbunigwe ahụ dara, ụgbọ okporo ígwè jupụtara
Na Russia, ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu mebiri emebi mgbe oke mmiri kwaturu n'ihi oke mmiri ozuzo. Traingbọ ụgbọ mmiri buru ibu na-ebute unyi n'ihi nnukwu mmiri ozuzo n'obodo Siktiyvkar nke Komi Republic of Russia [More ...]
The mbụ ụgbọ okporo ígwè na-anakwa mbupụ ụzọ gasị n'etiti Turkey na Georgia, ga-agwa ijeoma ememe ga-ẹkenịmde ke Erzurum Palandöken lọjistik Center. Iron Silk Road, mara dị ka Baku-Tbilisi-Kars (BTK) na Turkey, na ntinye n'ime ọrụ nke ụgbọ okporo ígwè akara [More ...]
Na steeti United States nke Nevada, 10 The Union Pacific ụgbọ okporo ígwè, na-ebu jeeps dị mma gburugburu 9.00 na July, derailed. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke jeeps aghọwo ihe a na-apụghị izere ezere. Jeeps na ntinye aka na mberede ahụ [More ...]
Adana-Mersin ibu ụgbọ oloko na na-eme ka nwa agbọghọ njem nke mgbagharị ebu Siria echiche nke okuku mgbe ugbo ọrụ mberede afọ ikpeazụ 6 17 ndị nwụrụ pụtara. Ihe na-eme njem njem Adana-Mersin [More ...]
Ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala na-agba n'Austria, 2 Dead
N’akụkụ obodo Neudorf bei Wildon na Styria, Austria, ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu kụrụ ụgbọ ala na-agafe larịị, na-egbu 2. Na nkwupụta edere ede si n'aka ndị uwe ojii Styrian, Neudorf [More ...]
243 Democratic Republic of Congo
Ụgbọala abụọ ụgbọ oloko na Congo 13 Dead
Egburu 13 na ndị 25 merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ mere n'ihi nkwekọrịta nke ụgbọ okporo ígwè abụọ na ọdụ ụgbọ elu Ngodji na Pointe-Noire nke Congo Republic. General Manager of Congo Railways (CFCO) Jean-Claude [More ...]
MHP Mersin Deputy Şimşek, Ihe Nlekọta Ọhụụ Nile
Mgbe ihe mberede ụgbọ okporo ígwè na Yenice, bụ nke kpatara ọdachi ahụ na Mersin, a jụrụ MHP Mersin, bụ onye na-akwado Baki Şimşek, ka ọ bụrụ ihe mgbochi niile gafere. N'oge gara aga, Mersin gafere n'ogologo na-enweghị ihe mgbochi [More ...]
Na Tarsus district nke Mersin, e gburu ndị 1 ma merụọ ndị 3. Ihe mberede ahụ gosipụtara na igwefoto. Ụnyaahụ na 8: 12 LZ 00 na-arụ ọrụ ugbo gburugburu 63 [More ...]
Na Mersin, ndị na-arụ ọrụ ubi na-akụ ụgbọ oloko ahụ! 1 Nwụrụ Anwụ, 4 Ahụhụ
Na Tarsus district nke Mersin, ụgbọ okporo ígwè ahụ kụrụ 63 LZ 951 efere efere ndị ọrụ ugbo na-agafe. Na mberede ahụ, ndị mmadụ gburu 1 na ndị mmadụ gburu 2. Tarsus nke Mersin [More ...]